के तपाई आवश्यकताभन्दा बढी फेसियल त गर्नुहुन्न ? हुन सक्छन् यस्ता साइड इफेक्ट्सहरु - नेपाल कुरा
काठमाडौँ । अधिकांश मानिसहरु अनुहारमा चमक ल्याएर सुन्दर बन्न फेसियल गर्ने गर्दछन् । विवाह भोजमा जानु होस् वा कुनै पार्र्टीमा समावेश हुन, फेसियल अहिले शहरी फेसननै बनिसकेको छ । फेसियल गर्नु छालाको लागि राम्रो हो तर अत्याधिक फेसियलले अनुहार पनि विगार्न सक्दछ । यसले अनुहारको छाला विस्तारै विस्तारै विगार्दै लगिरहेको पनि हुन सक्छ । आज हामी बढी फेसियल भएको कुरा कसरी थाहा पाउन सकिन्छ र यसबाट उत्पन्न हुने लक्षणहरु कस्ता हुनेछन् भन्ने कुरा जानकारी लिनेछौँ ।
चिलाउने : अनुहारमा फेसियल गर्दा धेरै प्रकारका रासायनिक क्रिमहरुको प्रयोग हुन्छन् । यी क्रिमहरुको कम्बिनेसन सबैको छालालाई मिल्न आउँदैन र यसले छाला चिलाउने समस्या निम्त्याउने गर्दछ । पछि गएर एलर्जी रोग समेत उत्पन्न गराउन सक्दछ । तसर्थ यस्तो समस्या देखिने वित्तिकै तुरुन्तै आफ्नो अनुहारमा फेसियल गर्ने काम रोकिदिनुपर्छ । बरु हल्का गुलाब जलले मालिसचैँ गर्न सकिन्छ ।
छालामा रातो दाग : फेसियल गर्दा अनुहारमा धेरै स्क्रब र मसाज गरिन्छ । गलत मालिशका कारण अनुहारको छाला रातो हुन जान्छ र पछि छालामा संक्रमण पनि हुन सक्छ । यस्तो समस्या देखिएमा फेस मसाज कार्य तुरुन्तै रोकिदिनुपर्छ र डाक्टरकहाँ परामर्श लिनुपर्दछ ।
डण्डीफोहोर : डण्डीफोहोर भएको छालामा धेरै ध्यान दिएर फेशियल गर्नुपर्दछ । छाला कस्तो किसिमको हो तैलिय हो की ? सुख्खा हो ? थाहा पाएर त्यही अनुसारको लोसन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ नत्रभने यसले छालामा अझ बढी गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्नेछ ।
छालाको एलर्जी : फेशियलको समय विभिन्न प्रकारका उत्पादन क्रिमहरु अनुहारमा प्रयोग गरिन्छ, यसले छालाको एलर्जीको जोखिम बढाउँदछ । आफुलाई फाप्ने र नफाप्ने क्रिमको प्रयोग गर्नु उचित देखिन्छ । बजारमा आएका सस्ता क्रिमहरुले छालालाई नराम्री हानी पनि गर्नसकदछ । तसर्थ ब्रेण्डेडमा आएका कम्पनी क्रिमहरु प्रयोग गर्नु बुद्धिमता देखिन्छ ।
नोपलकुरा संवाददाता ।